जिज्ञासा – बिर्यमा वा पिसाब गर्दा तरल र ठोस पदार्थ (चामलजस्तो) किन आउँछ?
कान्तिपुर साप्ताहिक- म अहिले २१ वर्षको भएँ । मेरो वीर्यमा तरल र ठोस पदार्थ (चामलजस्तो) आउँछ । किन यस्तो आएको हो ? यस्तो भएको म १४ वर्ष हुँदादेखि हो । यसअघि तरल पदार्थ मात्र आउँथ्यो । केही महिनाअघि मेरो यौनकर्मीसँग कन्डम लगाएर सम्बन्ध स्थापित भएको थियो । सम्पर्कपछि कन्डमको बाहिर चिप्लो महसुस भएको थियो । मैले सोचें, केटीको योनिबाट निस्किएर लागेको होला, तर त्यसको दुई–तीन दिनपछि टाउको गह्रुँगो भयो । पिसाब गर्‍यो तर फेरि आएजस्तो हुने भएको थियो, अहिले भने यो समस्या छैन । त्यतिबेला मेरो मुखमा अल्सर (ulcers) आएको थियो र mouthwash liquid ले सफा गरेपछि आएको छैन । ओठको कुनामा बिमिराहरू र गालाको छेऊमा डल्लो (lump) आउने, तीन–चार हप्तापछि हराउने, लिङ्गको मुण्डमा पसिना/तेलजस्तो आउने हुन्छ । यो कस्तो खालको समस्या हो ?
के–कस्तो स्थितिमा चिन्ता गर्नुपर्छ ?
तपाईंले वीर्यको सन्दर्भमा भएको जिज्ञासाका साथै यौन रोग भएको हो कि भन्नेतिर संकेत गर्नुभएको छ । यौनकर्मीसँग भए पनि कन्डम लगाएर भएको यौन सम्पर्कमा यौन रोग लाग्ने सम्भावना निकै कम हुने भए पनि केही मात्रामा सम्भावना हुन्छ । तपाईंको टाउको दुख्ने जस्ता लक्षण तनावका कारणले भएको हुनसक्छ । विशेष गरी वीर्यमा आएको परिवर्तनसँगै यदि दुख्ने, ज्वरो आउने, यौन उत्तेजना वा यौन कार्यमा समस्या सिर्जना हुने, पिसाबमा रगत देखिने वा लिङ्गबाट असामान्य रस वा पीपजस्तो आएको स्थिति भने चिन्ताजनक हुनसक्छ । यस्ता लक्षणले यौनाङ्ग तथा प्रजनन अङ्गमा केही खराबी वा संक्रमणलाई संकेत गर्छन् । यौन रोगको शंका छ भने एकपल्ट पिसाब परीक्षण गराउन सकिन्छ । अर्को कुरा, वीर्य स्खलनका बेला बाक्लो, दानादारजस्तो भए पनि सामान्य अवस्थामा यस्तै एक घण्टामा त्यो पातलिएर जान्छ, तर एक घण्टा पछि पनि यस्तै चामल जस्तो दानादार भए संक्रमण भएको हुनसक्छ ।
लिङ्गमुण्डको corona को पछितिर स–साना sebacious glands (छालामा भएका तैलिय पदार्थ निकाल्ने ससाना ग्रन्थिहरू) हुन्छन् जसलाई Tyson’s glands भनिन्छ । यही ग्रन्थिबाट निस्कने तैलीय रस तथा छालाबाट झरेका कोषहरू जम्मा भए त्यसैमा जीवाणुको वृद्धि हुन्छ र सेतो पदार्थ बन्छ । यही सेतो पनिरजस्तो देखिने, एक प्रकारको गन्ध आउने फदार्थलाई smegma भनिन्छ । केही धार्मिक समप्रदायमा जस्तै कि हिन्दू संफ्रदायमा लिङ्गको अग्रचर्म काट्ने चलन छैन, त्यसैले smegma चाँडो जम्मा हुन्छ । यो सेतो पदार्थ पुरुषमा मात्र होइन, महिलामा समेत पाइन्छ । महिलाहरूमा भने यो सानो भगोष्ठको मुनि तथा भगांकुरको मुण्डको वरिपरि पाइन्छ ।
पहिलो कुरा त यो सेतो पदार्थ स्वाभाविक रूपमा निस्कने कुरा हो र यसरी सेतो पदार्थ निस्किँदैमा हानि हुँदैन, तर यसलाई सफा नै नगरी धेरै जम्मा भए समस्या हुन सक्छ । यसलाई सफा नगरिए यसको गन्ध प्रबल हुन्छ र त्यसले केही असजिलोपन ल्याउन सक्छ । अचेल बजारमा पाइने सुगन्ध छर्कने चलन चलेको बेला कतिपय प्राकृतिक गन्धलाई पनि दुर्गन्धका रुपमा लिइन्छ । गन्धकै कारणले यौन अंगलाई फोहर अंग मान्न सहयोग गरेको छ । जे होस्, यौनाङ्गको नियमित सरसफाई गर्नुपर्छ । तपाईंको ओठ तथा गालामा भएको समस्याको सन्दर्भमा सीमित जानकारीका आधारमा यसै भन्न सकिने स्थिति भएन । विस्तृत जानकारी पठाउनुभयो भने उत्तर दिने प्रयास गर्नेछु ।